I-Disk Cleaner Suite, iyathengiswa ixesha elincinci | Ndisuka mac
Ukubhiyozela ukufika kwempelaveki, namhlanje ndikuzisela into entsha nenomtsalane kwiVenkile yeApple yeMac. Ngexesha leentsuku ezimbalwa ezizayo, ngokuqinisekileyo uya kuba nexesha elininzi lasimahla, kwaye ke ngoko Lixesha elilungileyo lokuyilungisa iMac yakho kwaye ngoMvulo olandelayo liza kuqala njengelitsha. Le yinto onokuyenza enkosi kwesi sixhobo simangalisayo nesigqibeleleyo endikunika sona namhlanje.
Ku malunga Isicoci sedisk Suite, isicelo sokuba iyakwandisa ukusebenza kunye nendawo yezixhobo zakho ngokukhawuleza nangokulula; isixhobo esenziwe ngenene ngemisebenzi emihlanu eqokelelwe endaweni enye, kwaye ngoku ungasifumana nje isinye kwisithathu sexabiso laso.
1 I-Disk Cleaner Suite, ii -apps ezintlanu kwenye ukugcina iMac yakho ilungile
1.1 Eyona nto iphambili kwiDisk Cleaner Suite
I-Disk Cleaner Suite, ii -apps ezintlanu kwenye ukugcina iMac yakho ilungile
Ukugcina i-Mac yethu ilungile, namhlanje, umsebenzi olula kakhulu pero Yintoni esifanele siyenze rhoqo Ukusukela ukukhangela i-intanethi, izixhobo zokugcina izixhobo, okanye ukufakela / ukungafakwa kwezicelo, phakathi kwezinye izinto, gcwalisa ikhompyuter yethu ngezinto esingazaziyo nokuba zikhona, kodwa ezigcina zithintela amandla okugcina, ukusebenza kunye nesantya seMac yethu. .
Ukuba uqaphele ukuba iMac yakho, ngaphandle kokuba ihlaziywe ngokupheleleyo, ayihambi ngokukhawuleza kwaye iyancipha njengoko kufanelekile, okanye ukuba uqaphele ukuba ukugcinwa kwangaphakathi kuye kwahlangabezana nokudodobala okukhulu kwaye awazi ukuba yintoni, okanye ukuba amaxesha ngamaxesha, kwaye ungazi nyani ukuba kutheni, iintengiso ezingafunekiyo zivela kwiifestile ezivelelayo ngelixa ukhangela kwi-intanethi, emva koko, mhlobo kunye nomhlobo, ixesha lifikile lokucoca. Ukwenza oku, akukho nto ingcono kunokusebenzisa ithuba lokunikezelwa Diski icocekile Suite, Isixhobo esinexabiso elikhulu ngoku onokuba naso ngee-euro ezingama-0,99 (kangangexesha elilinganiselweyo) kwaye oko kuyakushiya ikhompyuter yakho iphantse yafana nolo suku wawukhupha ngalo ebhokisini.
Eyona misebenzi iphambili ye Isicoci sedisk Suite
Njengoko benditshilo ngaphambili, Isicoci sedisk Suite Kufana nokuba nezicelo ezintlanu kwenye, kuba ibonelela ngemisebenzi emihlanu okanye amanqaku amakhulu onokuyifumana kwii -apps ezihambelanayo, kodwa apha unazo zonke zihlanganisene kwenye. Masibone:
Khulula indawo yokugcina. Isicoci sedisk Suite "Icoceka" i-hard drive yakho emva kokuba ifumanise isusa kwaye isuse zonke iifayile ze-junk ezingasasebenziyo (intsalela yokukhuphela, intsalela yee -apps ezingafakwanga, ii-cache, njlnjl.). Ngeendawo ezininzi ezikhululekile, iMac yakho iya kuhamba ngokukhawuleza.
Sala kakuhle kwintengiso ezicaphukisayo. Ngamanye amaxesha, ufakelo lweapps ezithile lubandakanya ezinye izongezo zeSafari, iChannel okanye iFirefox evula iintengiso ngohlobo lwe-pop-ups ngaphandle kwethu kokufuna. Ngesi sixhobo uya kuba nakho ukususa ezi zinto ngesibetho, kwaye ubuye ubuyisele useto lwesikhangeli olisebenzisa kwimeko yalo yesiqhelo.
Phinda isicoci seFayile. Ngubani ongenazo iifayile eziphindiweyo, nokuba zenziwe kathathu, kwi-Mac yazo? Kuqheleke ngakumbi kunokuba ucinga kodwa nge Isicoci sedisk Suite Uyakwazi ukuphonononga yonke i-hard drive yakho ngokukhawuleza kwaye iapp iyakuthi ifumane iikopi zeefayile ukuze uzicime kwaye ufumane indawo engakumbi. Ungayenza nakwiifolda ezithile ngokurhuqa kwaye ulahle.
Coca ukukhipha usetyenziso. Kwi-macOS, tsala ngokulula iapp kwi-trash (kwaye ungabinanto kudoti) ukuyisusa kwinkqubo. Nangona kunjalo, inyani kukuba intsalela yolo fakelo iya kuhlala kwi-Mac (iifayile zexeshana ezinje ngobhaliso, i-cache, useto, izongezo, njl. Kunye Isicoci sedisk Suite Uyakwazi ukuqhuba ukufakela ukucoceka kwezicelo ngaphandle kokushiya ukuphumla kwinkqubo. Ukucinywa kuyakhawuleza, kuyasebenza, kuphelele kwaye kukhuselekile.
Ukucinywa kwefayile ngokukhawuleza. Ngokwesiqhelo, njengeeapps, ukucima ifayile kubandakanya ukuyisusa enkunkumeni kwaye emva koko ulahle inkunkuma, amanyathelo amabini onokuthi ngoku wenze lula ngokukhetha "Ukucoca nokucima". Ukongeza, unokukhetha phakathi kwe "pass" ezininzi (1, 7 okanye 35) ukuqinisekisa ukuba ifayile ekubhekiswa kuyo isusiwe kwidiski, njengekhompyuter yeBárcenas.
Njengoko ubona, Isicoci sedisk Suite sisixhobo esigqibeleleyo nesiluncedo onokufumana i- € 0,99 kuphela, endaweni yesiqhelo se- € 2,99. Kodwa khawuleza, kuba umnikelo uphela ngesithathu, ezimbini, inye ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » I-Disk Cleaner Suite, ithengiswa ixesha elincinci